Incukacha ezintsha nge Corona - Harambee.Mobi
Incukacha ezintsha nge Corona
siSwati Sesotho IsiXhosa IsiZulu Afrikaans English
Ulwazi olubalulekile nge Coronavirus
Kugqityelwe ukuhlaziywa: 30 Utshazimpuzi 2020
UMzantsi Afrika okwangoku ukwisimo somiso ngxi ukunqanda ukusasazeka kwale ntsholongwane – oku ke kuthetha ukuba wonke umuntu makahlale ekhaya kude kubekho esinye isaziso.
Akudingeki ukuba uye kumazwe aphesheya kolwandle ukuze wosuleleke – le ntsholongwane ikhona nalapha e Mzantsi Africa, ngokunjalo nabantu abatsha bangachaphazeleka ze bagule kakhulu.
Zeziphi impawu zaso?
Ezona zixhaphakileyo zezi:
Abantu aba 4 kwaba 5 abathe baziva ezimpawu kancinci bangahlala endlwini babencono bengakhange baye esibhedlele okanye bafumane uncedo lwasesibhedlele. Ukuba ucinga unayo lentsholongwane tsalela umnxeba woncedo olungxamisekileyo : 0800 029 999. Unako ukuyisasaza lentsholongwane nokuba akuziva ugula okwelothuba. Kungako umiso ngxi lwentshukumo lubalulekile.
Ungahlala ukhuseleke njani?
Eyonanto ibalulekile unokuyenza kukuhlala ekhaya. Phuma endlini kuphela xa usiya kuthenga ukutya, amayeza, usiya kwi social grant okanye ubonana nogqirha. Izithuthi zikawonkewonke ziyakufumaneka phakathi ko 5am ukuya ku 10am, nokusukela ku 4pm ukuya ku 8pm ukuncedisana nokwenza oku. Ukuhlala ekhaya kunganqanda lentsholongwane inganwenwi.
Hlamba izandla zakho rhoqo
Sebenzisa isepha namanzi abalekayo ukuba unawo. Xa ungenawo sebenzisa isitya esincinci ze ucele ilungu losapho lukugalelele apha ezandleni. Hlamba izandla zakho kangangemizuzwana engamashumi amabini (20 sec). Ukuba uhlala kwindawo engenawo amanzi tsalela lomxeba 0800 200 200 uRhulumente ukuphulo lokuzisa amanzi kwezondawo ziwadingayo.
Gcina umgama oyi 1.5m kude nabantu.
Ukuba ungaphandle kwekhaya gcina umgama ongu 1.5m kuye nabani odibana naye. Musa ukuxhawula ngesandla. Lentsholongwane ihamba ngamachaphaza amathe (saliva) ngako oko ke ukuba umela kude ngokwaneleyo unciphisa amathuba olwasuleleko nokuba ungadibana naye ochaphazelekileyo. Khumbula ukuthimla okanye ukukhohlela ukhusela ngengqiniba!
Hlala unolwazi kwaye uphaphile
Sebendzisa ikhasi ye COVID-19 yeFunzi, ibizwa yi “Adapt and thrive”. Yijoyine kwaye niyiphumelele (isebenzisa kakhulu, idatha encinci) okanye undwendwele indawo yasimahla yeSebe lezeMpilo. Ngale ndlela ukuba umntu ukuxelela okuthile malunga nentsholongwane uya kukwazi ukukhangela ukuba ziindaba ezingeyonyani na.
Cebisa abanye bahlale endlin.
Yiba ngumzekelo apho uhlala khona kwaye ukhuthaze abanye ukuba bayithathele ingqalelo lento yale ntsholongwane ngohlala ezindlini.
Quqa ubuyelela kweli-candelo rhoqo khona ukuze umane ukuthi gqolo ukuhlaziya incukacha kule ndawo.
© 2020 Harambee. All Rights Reserved.